Amandla eeNkcukacha ngeMigodi kunye neNkqubo yokuXhasa iZigqibo | Martech Zone
NgoLwesibini, nge-10 kaDisemba ngo-2013 NgoMvulo, nge-9 kaDisemba ngo-2013 Douglas Karr
Le infographic evela kwiNew Jersey Institute of Technology ibonisa iMigodi yeDatha kunye neNkqubo yokuXhasa iZigqibo, ichaza iinkqubo ezine ezahlukeneyo kwinkqubo yonke.
Ulawulo lweenkcukacha -Uqokelela ulwazi olufunyenwe yinkampani kwintengiso, iirekhodi kunye neengxelo zabathengi.
Ulawulo lweModeli -Iinzame zokwenza izigqibo kwizicwangciso ezikhoyo zeshishini ukubona ukuba ziyaphumelela okanye hayi.
Injini yoLwazi -Ijonge ukwenza iiparadigms ezintsha zokunxibelelana neendlela ezihamba ngayo.
Indawo yomsebenzisi -Ivumela unxibelelwano kwidatha uqobo.
Okokuqala, ulawulo lwedatha, luqokelela ulwazi olufunyenwe yinkampani kwintengiso, iirekhodi kunye neengxelo zabathengi. Imodeli yolawulo izama ukwenza izigqibo kwizicwangciso zeshishini esele zikhona ukubona ukuba ziyaphumelela okanye hayi. Injini yolwazi ijonge ukudala iiparadigms ezintsha zokunxibelelana neendlela ezihamba ngayo. Okokugqibela, ujongano lomsebenzisi luvumela unxibelelwano kwidatha uqobo. Icandelo ngalinye lenkqubo linokuqhuba elinye icandelo.
tags: Lawulo lwe dataImayini yedathaInjini yolwaziuphando lwemakethiimodeli yolawuloIndawo yomsebenzisi
I-infographic eluncedo kakhulu ekusetyenzisweni kwemigodi yedatha. Enkosi ngokwabelana ngolwazi olufanelekileyo.